Industrial n'ihu scrap Taia Pyrolysis Equipment - China NIutech Environment
Industrial n'ihu scrap Taia Pyrolysis Equipment
Scrap Taia Pyrolysis ngwá Production Usoro
The scrap taya na-shredded n'ime kwesịrị ekwesị taya ibe na nọgidere na-nri n'ime chernobyl maka nkịtị mgbali ala okpomọkụ pyrolysis ọnụ na ala okpomọkụ sọlfọ nyefe mkpali site na-ekpo ọkụ akara ngwaọrụ.
The pyrolyst mmanụ gas na-ghọọ mmanụ na obere combustible gas (imegharị ojiji mgbe scrubbing) mgbe fractionation na obi jụrụ site mmanụ separator.
Siri ike mmepụta raw carbon nwa na ígwè ga-iche site na magnetik separator. The raw carbon nwa ga-akpaghị aka kpọfere carbon nwa mmepụta usoro na ulo oru ọkwa carbon nwa ga-nwetara mgbe a oké njọ nke usoro dị ka-egwe ọka wdg ma ọ bụ ga-ọzọ di iche iche nke elu-uru chemical ihe onwunwe. The iche ígwè ike-ere dị ka scrap ígwè.
The combustible gas ga-kpam kpam na-eji dị ka mmanụ ụgbọala ka usoro mgbe scrubbing usoro. The kpo oku usoro adopts mmapụta okpomọkụ imegharị ihe maka iji nkà na ụzụ, nke anya-azọpụta oriri ike na ala ala na-agba ọsọ na-eri. The gas emepụta site na mmepụta akara ga-ọcha izute gburugburu ebe obibi ọkọlọtọ mgbe atara.
Production akara usoro
Taia shredding usoro (nhọrọ)
Ịnọgide okpomọkụ kpo oku usoro
Na-aga n'ihu pyrolysis usoro
Carbon black mmepụta usoro (nhọrọ)
Combustible gas scrubbing usoro
Gas ọcha usoro
Oil distillation usoro (nhọrọ)
Niutech Environment Technology Uru
Industrial na-aga n'ihu, oke throughput, welie ọgwụgwọ arụmọrụ na mmepụta ike.
Nanị ala okpomọkụ pyrolysis technology, ala oriri, welie mmanụ mkpụrụ ma àgwà, hụ na ogologo okwu, na-aga n'ihu na otu ebe ọrụ mmepụta, n'ụzọ dị ịrịba ama na-agbasa ngwa * lifespan.
Nanị mgbochi cocking, kwes nkesa technology, nwee ihe dokwara kpụ ọkụ n'ọnụ na? Kpamkpam pyrolized, ka enweta elu àgwà ngwaahịa.
Nanị na-ekpo ọkụ akara technology, iji hụ na ọrụ dị mma na a pụrụ ịdabere.
Nanị gas ọcha na fọdụrụ okpomọkụ imegharị ihe maka iji itinye n'ọrụ technology, ọcha gas ike ga-eji maka kpo oku usoro dị ka combustible gas, fọdụrụ okpomọkụ nwere ike dully tinye n'ọrụ, ghọtara onwe-ọkọnọ maka pyrolysis mmeghachi omume enweghị mmezi kpo oku iyi, n'ụzọ dị ịrịba ama na-ebelata na-agba ọsọ na-eri.
Iyuzucha gas nke mmepụta akara a nwaleworo, niile emission oke ihe a chọrọ n'aka nke EU EEA nke EU na US EPA.
Dum mmepụta akara ịmụta PLC nwere ọgụgụ isi akara, ịdọ aka ná ntị, mkpu na akpaaka-mgbazi ọrụ, amụma mkpuchi ọrụ n'okpuru nchekwa ọnọdụ.
Low chọrọ iji manpower, Low-arụ ọrụ ike ma dị ọcha mmepụta.
Comparison Chart "tụnyere nke ugbu a technology ọnọdụ n'agbata anụ ụlọ na ná mba ọzọ"
Ot nkọwapụta na nnabata na EEA ọkọlọtọ na EU na EPA ọkọlọtọ na US
The nanị owuwu họrọ ime na mbara itinye n'ọrụ nke n'efu taya ụlọ ọrụ ohere ọnọdụ nyere site MIIT
Core Ikike nchọpụta (Overseas)
Core Ikike nchọpụta (Domestic)
Previous: Oil distillation usoro Best High-Quanlity Products
Next: n'efu plastic imegharị ihe maka iji mkpofu Best High-Quanlity Cheap Products
Q: Olee ihe na ikike àmà na ị pụrụ inye?
A: Anyị pụrụ inye 10000T / Y} 20000T / Y} 30000T / Y na ibu akọ
Q: ihe bụ ụdị usoro ị pụrụ inye?
A: Industrial n'ihu scrap Taia Pyrolysis Production Line; Industrial n'ihu Waste Plastic Pyrolysis Line; Oil distillation usoro; Carbon Black Ọzọkwa Ọgwụgwọ System
Q: The Space Iwu?
A: Ma a 10,000T / Y akara, ogbako omumuihe nke pyrolysis ngalaba bụ 48m * 20m * 9m, nke a na-ewepu taya (ma ọ bụ plastic) shredding na okokụre ngwaahịa ọgwụgwọ noo
Q: Labor Iwu?
A ㄩ No oru mkpa n'oge mmepụta, ma naanị maka akara, nnyocha na njem. Ma a 10,000T / Y akara, ọ chọrọ banyere 3-4 ọrụ / mgbanwe
Q: nzipu Oge?
A: Ma a 10,000T / Y akara, ọ chọrọ banyere 5-6 ọnwa
Q: Ga gị ụlọ ọrụ na-enye onsite Nwụnye na Tụgharịa-Key Project?
A: N'ihi na Europe anyị zuru ezu inye onsite echichi na Tụgharịa-Key Project; maka mba ndị ọzọ na mpaghara ọzọ karịa Europe, anyị pụrụ inye elekọta echichi, Jizọs na-ezipụ na oru ọzụzụ ọrụ.
Q: Olee otú ị pụrụ isi gosi na gị technology na akụrụngwa kacha elu na ike onye na ubi?
A ㄩ Anyị na-esi ọnwụ na ikpokọta theoretics na omume na-emepe emepe anyị technology. Anyị nwere ọtụtụ afọ bara ọrụ ahụmahụ nke pyrolysis osisi na anyị hụrụ na mere na kwalite na mgbanwe ahụ. Mgbe ugbu a, anyị nwere ọtụtụ azụmahịa na-aga n'ihu na-agba ọsọ ahịa * osisi dị iche iche ná mba.
Q: nwere ike ị na-enye saịtị nleta nke gị na-agba ọsọ osisi?
A: Ee, anyị pụrụ inye ẹdude ahịa * s osisi gị na saịtị nleta.
Q: Gịnị bụ ngwa nke mmanụ na carbon nwa
A: The mmanụ nkọwapụta mepụtara anyị na-aga n'ihu pyrolysis mmepụta akara na-agbaso SH / T0356-1996 No 4 Light Fuel Oil. The na-emepụta mmanụ nwere elu okpomọkụ uru na ala sọlfọ ọdịnaya, ike ga-eji na-ere ọkụ, generator na raw na mmanụ maka distillation wdg The mmanụ mgbe distillation usoro nwere ike na-etinyere maka nnukwu ike-ala ọsọ dizel engine, engineering na ugbo ugbo ala / mmiri engineer na ụdị nile nke generators.
Maka ngwa nke Carbon Black, biko kpọtụrụ anyị na-enweta ihe nkọwa
scrap taya pyrolysis mkpofu
n'efu taya pyrolysis osisi
n'efu taya pyrolysis mkpofu
n'efu taya pyrolysis igwe
Next: Imefusị Plastic Pyrolysis Machine na Ofụri Esịt-aga n'ihu ime
Na-aga n'ihu scrap Taia Pyrolysis System
High Uru Waste Taia Recycling Plant
Hot ere Oil Pyrolysis anụcha Machine
Pyrolysis Plant Na Gujarat
Pyrolysis Plant Plasti c Waste
Pyrolysis egweri Company
Rubber nhazi Line
Scrap Taia Pyrolysis System
scrap Taia Recycling Machine
scrap Taia Pyrolysis Machinery
Tech Waste Taia Recycling Plant
Taia Oil Pyrolysis
Taia Pyrolysis Oil Plant
Taia Recycling Machines Iji Oil
Taia Recycling Plant Iji mmanụ
Ji Taia Recycling Pyrolysis Machine
Imefusị Plastic anụcha Iji mmanụ
Waste scrap Plastic Taia Pyrolysis
Waste Taia egweri Iji mmanụ
Waste Taia Recycling Iji mmanụ Machine
Waste Taia Recycling Machine Iji Oil
Waste Taia anụcha Iji Fuel Oil
Waste Taia Iji dizel Plant
Waste taya Iji mmanụ ụgbọala egweri
Latest Technology nke Industrial n'ihu gi ...
High Oil mmepụta n'ihu Waste Taia mmanụ ụgbọala O ...
Scrap Taia Pyrolysis na N'ezie Industrial cont ...
Ọkụ ekele ọhụrụ osisi Niu ...
Niutech New weebụsaịtị Eze Online